AKHRISO: Warbixin Sawir Buuxa Ka Bixinaysa Xasuuqii Ayshaca Ee 1960 Iyo Qaabkii Ciidamada Itoobiya Dadka U Laayeen - Jigjiga Online
HomeSomalidaAKHRISO: Warbixin Sawir Buuxa Ka Bixinaysa Xasuuqii Ayshaca Ee 1960 Iyo Qaabkii Ciidamada Itoobiya Dadka U Laayeen
Ayshaca (JigjigaOnline) – Xuska sannad guuradii 59-aad ee ka soo wareegtay xasuuq la sheegay in boqorkii Itoobiya ka talin jiray ee Xayle Salaase uu kula kacay dad Soomaali ah ayaa lagu qabtay magaalada Ayshaca.
Degmada Ayshca oo ka tirsan Gobolka Sitti ee Deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa 59 sano kahor lagu laayey dad ka badan 2,000 oo qof oo Soomaali ah.
Laynta dadkaasi ayaa sida la sheegay waxaa ka dambeysay dowladdii boqor xayla salaase oo xilligaa ka arrimineysay dalka Itoobiya.
Sababaha dadkaas loo laayey ayaa qaar ka mid ah dadkii goob joogga ahaa waxay sheegeen in ay ka mid ahayd in dadka Soomaalida ah ee deegaankaas ku nool ay soo dhaweeyeen oo ay u dabbaal dageen xorriyaddii Soomaaliya ee 1960-kii.
Waxaa sidoo kale la sheegay in nin caddaan ah oo Faransiiska u dhashay oo deegankaasi lagu dilay ay ka mid ahayd sababaha dadkaas loo xasuuqay.
Xaaji Cali Dugsiiye wuxuu ka mid ahaa dadkii goob jooga u ahaa dhacdadaas isla markaasna lagu laayey qaar ka mid ah xigtadiisa.
Waxa uu BBC-da uga warramay sababihii keenay in dadkaas la laayo.
Xaaji Cali ayaa yiri “Dadkaas Xayla Salaase ayaa gumaaday, wuxuuna u gumaaday Soomaali nacayb, wuxuu islahaa Soomaali hadday calan hesho geeso biciid ayay yeelanaysaa”.
Wuxuu intaas ku daray in walaalkiis oo ahaa curadkii hooyadiis uu ka mid ahaa dadkii halkaas lagu xasuuqay.
Xaaji Cali Dugsiiye ayaa sheegay in nin Soomaali ahi uu deegaankaas ku dilay nin Faransiis ah isla markaasna uu boqorkii Itoobiya ka talinayey ee Xayle Salaase uu amar ku bixiyey in la soo qabto ninkii dilka geystay.
“Keenuu yiri ninkii dilay haddii kale idinkaa la idin madhinayaa, muddo shan cisho ah ayaa naloo qabtay, markii la keenayn gaar ayuu nalaka qabtay”.
Wuxuu intaas ku daray in xasuuqaas uu socday muddo 15 cisho ah, dadka la laayeyna lagu qiyaaso 2,000 oo qof.
Ilaa iyo hadda ma jirto wax magdhow ah oo dadkaas la xasuuqay laga bixiyey sida uu BBC-da u sheegay Xaaji Cali Dugsiiye oo ka mid ah dadka deegaakaas isla markaasna goob joog u ahaa wixii halkaas ka dhacay.
Donald Trump Oo Lagula Taliyey In Saldhigga Milateri Ee Djibouti Uu U Wareejiyo Somaliland